Somaliland: Go’aankii Guddiga, Goyntii Waqtiga Shirka, Galgalashada Faysal Iyo Afeefta Garabka Jamaal - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Go’aankii Guddiga, Goyntii Waqtiga Shirka, Galgalashada Faysal Iyo Afeefta Garabka Jamaal
“Faysaloow Niman Kaa Hadhaya Ma Nihin, Haddaad Doonayso In Lagu Yidhaa Xisbiga Adaa Leh Taasi Dhici Mayso”
Hogaamiyayaasha mid ka mid ah labada garab ee xisbiga Ucid isu hayo oo dhawaan guddiga diiwaangelinta urruradda siyaasadda iyo axsaabta qaranku ay go’aan ka soo saareen khilaafka u dhexeeya, ayaa ka dayriyay dhinaca Faysal Cali Waraabe oo ay ku tilmaameen inay dhankiisa ka socon la’yihiin fulinta go,aamaddii guddigu ku dhexdhexaadiyay.
Gudoomiye ku xigeenka Sadexaad ee Ucid Cali Guray iyo Murashaxa Madaxweynaha xisbigaa Jamaal Cali Xuseen oo ka hadlay shir jaraa’id oo ay wadajir u qabteen garabkoodu ayaa ku eeddeeyay khilaafka Ucid dhanka Kulmiye oo ay horeba ugu eedayn jireen, isla markaana shaaca ka qaaday haddaanuu Faysal u hogaansamin go’aanka guddiga inay qaadi doonnaan sharciyan talaabooyinka ay xaqa u leeyihiin. Cali Guray oo ugu horayn ka hadlay shirkaa waxa doodiisii ka mid ahayd oo uu yidhi; “Sharciyan gudoomiyaha sadexaad ee Ucid waa aniga, haddii faysal diido 50% uun buu u noqonayaa Gudoomiye, haddii kale wixii ka soo baxa shirweynaha, shirweynahana waxa laga yaabaa in aanan isa soo sharaxinba, haddii isaga waxani la wayn yihiin. wuxuu ku celceliyaa murashaxa Kulmiye iyo murashaxa Ucid baa isku reer ah, waxaanuu doonayaa ama lagu soo yidhi inuu isagu murashax noqdo oo isaga iyo Cirro miyaanay isku reer ahayn, maxaa midna ka dhigay xalaal, midna ka dhigaya xaarraan. haddiise ay jirto cid ka hadlaysa arrinkaa oo dhankayaga ahi rag bay yihiinne ha noo soo badheedhaan anaga, maxay Faysal Cali waraabe iyo Ciidagale ugu meeraysanayaan, maxay Cali Mareexaan ugu meeraysanayaan, waar haddaa umaddan danteeda ka talinaysaan oo talo haysaan Ilmaadeer baynu nahee maxaa anaga noogu iman la’dihiin.”
Cali Guray wuxuu intaa ku sii daray oo uu yidhi; “Shirkaa haddii la qaban waayo, oo sidii lagu heshiiyay in uu u socdo ay hirgeli waydo, kiis cusub oo dacwad rasmiya ah oo aanu ku codsanayno, in aanu nahay laba dhinac sida ku cad go’aanka guddiga, oo dhinac keliyi xisbigii iska maamulanayo, oo xafiisyadii iska maamulanayo, oo lacagihii iyo kharashyadii xisbiga iska maamulanayo, waxaanu bilaabi doonnaa, waa haddii ay dhacdo in mar kale nalagaga baxo wacadkan cusub ee aanu wada galay, in la xidho dhamaan xarumaha xisbiga Ucid.”
Geesta kal murashaxa Madaxweynaha xisbigaa Jamaal Cali Xuseen oo shirkaa jaraa’id ka hadlay waxa weedhihiisii ka mid ahaa oo uu yidhi; “Guddigu wax kale may niqin ee waxay sameeyeen uun heshiiskaas uun dhamaysta bay yidhaahdeen. Anigu waxaan rumays nahay inay Faysal u nasteexeeyeen, wax badan baanu ku dacwaynay, wixii oo dhan way ka gows adaygeenoo, nimankaasi waxay is yidhaahdeen xisbigaa isku haya, oo odayga u nasteexeeya, waxaanay diiddeen xisbigaasi inuu gacantooda ku burburo. Faysal maalintii laga soo baxay halkaa sadex jeer buu hadlay, mar wuxuu yidhi waan diiday, mar wuxuu yidhi waan ka soo tashanayaa, marna wuxuu yidhi waan guulaystay oo waan ogolaaday, waar bal meel uun ha isugu luga duwado Faysal. hadduu leeyahay ambiil baan ka qaadanayaa waxan xaq buu u leeyahay, taasina sharaf dhac uun bay u tahay, xisbigana uma sii wanaagsana, Anaguna niman hadhaya ma nihin, Faysaloow niman kaa hadhaya ma nihin, Adigu waxaad doonaysaa in lagu yidhaahdo xisbiga adigaa iska leh ee waxaad doonto samee, taasina mid dhacaysa maaha, Maxkamadda Sarena jidkaa guddiga diiwaangelintu raacay uun bay raacaysaa oo niman doonaya in xisbigu gacantooda ku burbur oo la eeddeeyo maaha.”
Jamaal Cali Xuseen wuxuu intaa ku daray oo uu aad ugu mahadnaqay beesha uu dhalasho ahaan ka soo jeedo Gudoomiye Faysal waxaanuu yidhi; “Waxaanan ka geyoonayn mahadnaqoodda qabiilka Faysal cali waraabe ka soo jeedo, soomaalidu qabyaalad bay isku raacdaa oo waxaad arkaysaa nin aan gar lahayn oo gardaro wada oo qabiilkiisu xaqdaro ay ku taageerayaan, laakiin Faysal Cali Waraabe reerkiisu gobtii somaliland bay noqdeen. Haddii xisbiga Ucid burburi lahaa maantana, iyadoo xisbigii Udubna uu hore u burburay, maanta ceeb bay ku ahaan lahayd xukuumadda Siilaanyo, laba xisbi qaran oo mar wada burburaa, Madaxweyne Siilaanyo qudhiisu mahadnaq buu leeyahay mar haddii guddigan uu sameeyay ay noqdeen.”